ဆနျခြို အင်ျဂလနျနဲ့ ယူကရိနျးတို့ရဲ့ ဒီညပှဲမှာ ပါဝငျလာမှာလား…. – the One Sports Journal
အင်ျဂလနျအသငျးဟာ ယူကရိနျးအသငျးနဲ့ ယူရို ( ၂၀၂၀ ) ကှာတားဖိုငျနယျ ပှဲစဉျကစားဖို့ ရောမမွို့ကို ရောကျရှိနပေါပွီ။ ပွီးခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ ပှဲစဉျတှမှော ဆနျခြိုဟာပှဲထှကျကစားခှငျ့မရရှိခဲ့သလို အရေးကွီ အစိတျအပိုငျးတဈရပျအနနေဲ့ပါဝငျထားခွငျးမရှိသေးပါဘူး။ ဒေါ့မှနျအသငျးမှာ ခွစှေမျးတှပွေသနခေဲ့တာကွောငျ့ အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ လူစာရငျးမှာပါဝငျခဲ့ပမေယျှ့င်ျဂလနျအသငျးမှာ ပှဲထှကျကစားခှငျ့မရခဲ့တာဟာ ကစားသမားအပွောငျးအရှေ့ ကိစ်စတှကွေောငျ့လညျး တဈစိတျတဈပိုငျးပတျသကျမှုရှိနနေိုငျပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ ဆနျခြိုရဲ့ အပွောငျးအ‌ရှေ့ ဒရမျမာတှေ ရပျတနျ့သှားပွီဖွဈတာကွောငျ့ ဂါရတျ ဆောကျဂိတျအနနေဲ့ သူ့ကို လှတျလပျစှာ ရှေးခယျြနိုငျပွီဖွဈပါတယျ။
ကွာသပတေးနကေ့ ပွုလုပျတဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ လကေ့ငျြ့‌ရေးအစီအစဉျမှာ ဓာတျပုံရိုကျကူးမှုတှပွေုလုပျခြိနျမှာလညျး ဆနျခြိုက လုံဝ ကွညျနူး ပြျောရှငျနတောတှရေ့ပါတယျ။ အပွောငျးအရှေ့ အတညျဖွဈသှားခြိနျမှာ သူ့ရဲ့ စိတျခံစားခကျြတှဟော သူ့ရဲ့ မကျြနှာမှာ ကနြေပျနမှေုတှကေို ဖျောပွနပေါတယျ။ အင်ျဂလနျအသငျး ဓာတျပုံဆရာကလညျး ဒီပုံရိပျကိုအမိအရ ရိုကျကူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးကလညျး ကာလရှညျ စောငျ့ဆိုငျးနခေဲ့ရတဲ့ ဆနျခြိုရဲ့ အပွောငျးအရှသေ့ဘောတူညီမှု ကို တရားဝငျ ကွညောသှားခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျအသငျးက အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ ယူရို ( ၂၀၂၀ ) ပှဲစဉျတှေ ပွီးဆုံးခြိနျမှာ ဆနျခြိုရဲ့ ဆေးစဈခကျြကို ရယူသှားမယျလို့ အတညျပွုပွောကွားထားပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ အပွောငျးအရှေ့ ညှိနှိုငျးမှုတှေ အဆုံးသတျနိုငျခဲ့ပွီဖွဈတာကွောငျ့ ဆနျခြိုအနနေဲ့ သူပွောငျးရှကေ့စားခငျြတဲ့အသငျးဆီကိုရောကျရှိလာပွီဖွဈတာကွောငျ့ စိတျသကျသာရာရနမှောပါ။
ဆောကျဂိတျအနနေဲ့ ဒီညမှာ ဆနျခြိုသာပါဝငျလာခဲ့မယျဆိုရငျ သူ့ရဲ့ လူရှေးခယျြမှုဟာ မပွီးပွတျနိုငျတဲ့ ဒေါ့မှနျအသငျးရဲ့ ဈေးကစားနမှေုကို သဘောမကတြာကွောငျ့ ကစားသမားကိုအနားချေါပွီး အရံခုံမှာထိုငျခိုငျးထားတယျလို့ ပဲ သုံးသပျရတော့မှာပါပဲ။
ယူနိုကျတကျ အသငျးမှာ အသငျးဖျောဖွဈလာတော့မယျ့ မကျဂှိုငျးယားကလညျး ” ဆနျခြို က ခွှငျးခကျြမရှိတဲ့အရညျအခငျြးရှိကစားသမားကောငျးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။အသကျငယျရှယျပမေယျ့လညျး ပှဲပေါငျးမြားစှာကို သူကစားထားသလို ခွစှေမျးထကျတဲ့လူငယျတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ အနာဂတျမှာ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျနဲ့အတူ အောငျမွငျတဲ့အနာဂတျတဈခုကို သူရရှိလာမှာပါ။ ” ဆိုပွီး ဆနျခြိုနဲ့ ပတျသကျလို့ ပွောကွားထားပါတယျ။
ဆန်ချို အင်္ဂလန်နဲ့ ယူကရိန်းတို့ရဲ့ ဒီညပွဲမှာ ပါဝင်လာမှာလား….
အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ယူကရိန်းအသင်းနဲ့ ယူရို ( ၂၀၂၀ ) ကွာတားဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်ကစားဖို့ ရောမမြို့ကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာ ဆန်ချိုဟာပွဲထွက်ကစားခွင့်မရရှိခဲ့သလို အရေးကြီ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ပါဝင်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒေါ့မွန်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းတွေပြသနေခဲ့တာကြောင့် အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ လူစာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပေမယ့်ွှင်္ဂလန်အသင်းမှာ ပွဲထွက်ကစားခွင့်မရခဲ့တာဟာ ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စတွေကြောင့်လည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပတ်သက်မှုရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ဆန်ချိုရဲ့ အပြောင်းအ‌ရွေ့ ဒရမ်မာတွေ ရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့် ဂါရတ် ဆောက်ဂိတ်အနေနဲ့ သူ့ကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကြာသပတေးနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်‌ရေးအစီအစဉ်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုတွေပြုလုပ်ချိန်မှာလည်း ဆန်ချိုက လုံဝ ကြည်နူး ပျော်ရွှင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ အပြောင်းအရွှေ့ အတည်ဖြစ်သွားချိန်မှာ သူ့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေဟာ သူ့ရဲ့ မျက်နှာမှာ ကျေနပ်နေမှုတွေကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ အင်္ဂလန်အသင်း ဓာတ်ပုံဆရာကလည်း ဒီပုံရိပ်ကိုအမိအရ ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းကလည်း ကာလရှည် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရတဲ့ ဆန်ချိုရဲ့ အပြောင်းအရွေ့သဘောတူညီမှု ကို တရားဝင် ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းက အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ယူရို ( ၂၀၂၀ ) ပွဲစဉ်တွေ ပြီးဆုံးချိန်မှာ ဆန်ချိုရဲ့ ဆေးစစ်ချက်ကို ရယူသွားမယ်လို့ အတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အပြောင်းအရွေ့ ညှိနှိုင်းမှုတွေ အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့် ဆန်ချိုအနေနဲ့ သူပြောင်းရွှေ့ကစားချင်တဲ့အသင်းဆီကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တာကြောင့် စိတ်သက်သာရာရနေမှာပါ။ ဆောက်ဂိတ်အနေနဲ့ ဒီညမှာ ဆန်ချိုသာပါဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ လူရွေးချယ်မှုဟာ မပြီးပြတ်နိုင်တဲ့ ဒေါ့မွန်အသင်းရဲ့ ဈေးကစားနေမှုကို သဘောမကျတာကြောင့် ကစားသမားကိုအနားခေါ်ပြီး အရံခုံမှာထိုင်ခိုင်းထားတယ်လို့ ပဲ သုံးသပ်ရတော့မှာပါပဲ။
ယူနိုက်တက် အသင်းမှာ အသင်းဖော်ဖြစ်လာတော့မယ့် မက်ဂွိုင်းယားကလည်း ” ဆန်ချို က ခြွင်းချက်မရှိတဲ့အရည်အချင်းရှိကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်ငယ်ရွယ်ပေမယ့်လည်း ပွဲပေါင်းများစွာကို သူကစားထားသလို ခြေစွမ်းထက်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အနာဂတ်မှာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အတူ အောင်မြင်တဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကို သူရရှိလာမှာပါ။ ” ဆိုပြီး ဆန်ချိုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။